Ukuze kwenziwe uhlu lwazo zonke izindawo ezithakazelisayo futhi izikhungo Petersburg kungaba infinity. Siqala ngencane wabo - ezemidlalo ekhonsathini yaseshashalazini izikhungo. Ice Palace, uPetru bangaziqhayisa, lakhiwa ngo-2000. Injongo ukwakhiwa walo wawenziwe ucace kakhulu - ubambe imicimbi efana World Championship e ice hockey.
Ekuqaleni, ukwakhiwa sikhungo kuye kwabangela izingxabano. Kwakungenxa ukwakhiwa ezingafanele enjalo iphrojekthi ezibizayo kuleli dolobha. Ngu kokuphela imisebenzi kokwakha ukuqhudelana nabahamba phambili izakhiwo European, kanye izimakethe North American. Sekudlule iminyaka eyishumi nanhlanu. Futhi labo mpikiswano kokuqala akekho uyakhumbula. Ngempela, phakathi nayo yonke lenkathi, SCC njalo funa.
Lokhu esinezitezi ezinhlanu has a enkundleni ezintathu-tiered. ukuphakama kwakhe - 22 metres. Uma zesitezi lesibili nelesine, ungakwazi ukuhamba kule elicwebezelayo esigodlweni. Lesi sakhiwo uqobo yakhelwe nge ubuchwepheshe eliyingqayizivele elikuvumela ukuba ujike khona ihholo elikhulu phakathi. Ngesikhathi esifanayo silingane usayizi egumbini sinciphile umthamo wabo.
Isigodlo futhi kuyehluka kuneminye izinto ezifanayo ukubonakala kakhulu kusuka kunoma iyiphi indawo. Ngakho-ke, ngisho ngisuka esitezi engangikuso, ungacabanga isithombe egcwele okwenzekayo ngezansi. Lena wanelisekile ikakhulukazi abalandeli hockey ngenxa yethuba ukubheka umdlalo we ithimba lakho ozithandayo nge ukuphakama futhi ukuthola ukuthi kwenzekani nobunyonici wezindlela.
12.500 izibukeli - ukuthi amandla kwalesi sikhungo. Ejabulisa izivakashi zayo nge enjalo emikhulu izindawo efana Ice Palace, eSt Petersburg. Lesi sakhiwo inikeza izivakashi ukubeka balcony, inkundla yemidlalo yaseshashalazini, superkomfortabelnye Lodge. I yamuva ayizona emagumbini ehlukene. Ukuze induduzo ongaqhathaniswa amakamelo ehhotela. Cabanga, baze babe igumbi sigqoka futhi yangasese. Babuye ifakwe zangasese, izihlambi, ifenisha ukhululekile, izinto zasendlini nangezinto zobuchwepheshe. Lokhu kwenza ababukeli uphumule ngaphandle kokuphazamisa omakhelwane wakho.
Okwamanje, eziyinkimbinkimbi isetshenziselwa inhlangano kwezemidlalo imincintiswano. Kuyinto indawo ikhonsathi ukusebenza izinkanyezi emhlabeni. Ngaphezu kwalokho, iyindawo lapho nemibukiso Fairs, wahlela inkomfa. Inombolo izenzakalo agcinwe kule Ice Palace, liyakhula minyaka yonke. Kodwa ezinsukwini khulula kusuka eliyifa kwabo, ukuphila akumvimbi lapha. Labo abafuna angaya lapha esikhungweni salo mdlalo, ngokoqobo egijima kusukela ngosuku kuvulwa isakhiwo. Ukusebenza kulendlu isimo noma yimuphi umculi noma band. Isimo Ice Palace wabona amakhonsathi Ally Pugachevoy futhi Yuri Shevchuk, Marilyn Manson futhi Cher.
Indlela ukuya eziyinkimbinkimbi?
Ikheli lesikhungo - Prospect Pyatiletok 1A. Ungathola endaweni elula kunazo indlela. Othile enquma ukuhamba ukuya embukisweni noma umcimbi, okuyinto ethatha Ice Palace. Peter - idolobha elikhulu. Ngakho-ke, ukukhetha uhambo, ungaphila eziseduze we saseNevsky wesifunda. Uma uthola imoto yakho siqu, udinga i-ukuhlela umzila bese unquma yokupaka.
Izithuthi zomphakathi - lena enye indlela. Labo abafisa ukuthola kaMasipala kukhethwe ngokushesha. Ukuza aphume ke, uzokwenza izintaba endleleni kancane. Thola eziyinkimbinkimbi kuyoba lula - kungabonwa kusuka yimiphi ezitobhini eziseduze. Labo abathanda ezikhangayo ezifana Ice Palace, uPetru akufanele ezingabanjwanga. Ungakwazi simazi kangcono ulwazi oluthe xaxa mayelana into bese labetibambile ulinganisa ngokuhlwaya emithombolwazini website esemthethweni ye-sikhungo.
Luhambo okusha "Quantum Leap" ( "Sochi Park")
Inani labantu base-England: amasiko, amasiko kanye izici yokucabanga
Idolobhana Kirillovka. "Aris" - ukuzilibazisa ukhululekile phezu Azov coast
Annuity izinkokhelo: sikhethe kahle uma sisebenzisa loan!
60 akhawunti. "Ama-Akhawunti ekhokhwayo" - 60 amaphuzu
Utamatisi "truffle Japanese"